Momba ny fivoriana manaraka | Martech Zone
Nieritreritra be momba ny fivoriana aho tato ho ato. Ny lahatsoratr'i Seth hetsiky ny orinasa isan-taona nanome aingam-panahy ahy hanomboka handrafitra ity lahatsoratra ity. Amin'ny maha olona manana orinasa iray an'ny mpiasa iray dia mila mitandrina mafy aho amin'ny isan'ny fivoriana atrehako izay miteraka fidiram-bola.
Isan'andro dia nasaina hamonjy fivoriana iray aho - matetika kaopy kafe na sakafo atoandro. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, izy ireo dia fifandraisana matihanina na koa mitarika ka miteraka tsy fidiram-bola amin'izao fotoana izao, fa rahampitso mety hitarika zavatra. Mampientam-po tokoa ireo fivoriana ireo… mazàna ati-doha na paikady momba ny orinasa iray, ny varotra ataon'izy ireo, na ny teknolojia iray izay mihamitombo.
Hafa mihitsy izany tamin'ny taloha niasako tamin'ny orinasa lehibe izay nanao fivoriana isan'andro. Ny fivoriana any amin'ny orinasa dia lafo, manelingelina ny famokarana ary matetika dia mandany fotoana tanteraka. Ity misy karazana fivoriana manimba ny kolontsain'ny orinasa iray:
Fihaonana natao hahitana marimaritra iraisana. Ny vintana dia ny nanakaranao olona tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana ilay asa. Raha mivory ianao manapa-kevitra ho azy ireo… na ny ratsy kokoa… manala ny fanapahan-kevitra amin'izy ireo dia manao hadisoana ianao. Raha tsy matoky ilay olona hanao ilay asa ianao dia roahy izy.
Fivoriana hampielezana ny marimaritra iraisana. Hafa kely fotsiny ity… matetika no raisin'ny mpanapa-kevitra. Tsy matoky ny fanapahan-kevitr'izy ireo izy ary matahotra ny vokatr'izany. Amin'ny alàlan'ny fanaovana fivoriana sy fahazoana marimaritra iraisana amin'ny ekipa dia manandrana manaparitaka ny tsiny izy ireo ary mampihena ny tamberin'andraikitra amin'izany.
Fivoriana hanaovana fivoriana. Tsy misy ratsy kokoa noho ny manelingelina ny andron'ny olona iray mandritra ny fivoriana isan'andro, isan-kerinandro na isam-bolana izay tsy misy fandaharam-potoana ary tsy misy zavatra mitranga. Ireo fivoriana ireo dia lafo be amin'ny orinasa iray, matetika mitentina dolara an'arivony.
Ny fivoriana rehetra dia tokony hanana tanjona izay tsy ho tratry ny tsy miankina… angamba ny atidoha, ny fampitana hafatra manan-danja, na ny fanapotehana ny tetikasa sy ny fanomezana andraikitra. Tokony hametraka fitsipika ny orinasa tsirairay - ny fivoriana tsy misy tanjona sy ny fandaharam-potoana dia tokony holavin'ny mpanasa.
Taona maro lasa izay, nandia kilasy mpitarika aho izay nampianarin'izy ireo anay ny fomba hanaovana fivoriana. Toa mampihomehy izany, saingy manan-danja ny fandaniana amin'ny fivoriana amin'ny fikambanana lehibe. Amin'ny fanatsarana ny fivoriana rehetra dia nanangona vola, fotoana ary nanangana ny ekipanao ianao fa tsy nandratra azy ireo.
Ny fivorian'ny ekipa dia nanana mpitarika, a ny mpanora-dalàna (mandray an-tsoratra), a fotoana-mpiambina (hahazoana antoka fa ara-potoana ny fivoriana), ary a -mpiambina vavahady (hitazomana hatrany amin'ny lohahevitra). Ilay mpiambina fotoana sy mpiandry vavahady dia nanova ny fivoriana tsirairay ary nanana fahefana feno hanova lohahevitra na hampitsahatra ny fotoana iray.
Ny 10 minitra farany na isaky ny fivoriana dia nampiasaina hampivelarana ny Drafitr'asa. Ny Action Plan dia nanana tsanganana 3 - Iza, inona ary oviana. Voafaritra amin'ny hetsika tsirairay ny hoe iza no hanao ny asa, inona ny entana azo refesina, ary rahoviana no hisy azy ireo. Anjaran'ny mpitondra ny mitazona ny olona ampamoaka amin'ny fifanarahana natolotray. Amin'ny alàlan'ny fametrahana ireo lalàna ireo amin'ny fivoriana dia afaka nanova ny fivoriana tsy hanelingelina izahay ary nanomboka nanao azy ireo hamokatra.
Manome fanamby anao aho mba hieritreritra ny fivoriana tsirairay ataonao, na ny fidiram-bola, na ny vokatra, ary ny fomba fitantanana azy ireo. Mampiasa aho Mampandamina ny fivoriako ary manontany tena matetika hoe firy ny fivoriana tokony hataoko raha mila mandoa vola amin'ny carte de crédit ianao handaminana izany! Raha mila mandoa ny fivoriana manaraka ianao amin'ny karamanao, mbola hanana izany ve ianao?
Tags: kalandriefivorianaantony fivorianafandaharam-potoana
Sivano ireo subdomain ao amin'ny Google Analytics
Toro lalana efatra ho an'ny atiny amin'ny Internet azo vakiana
18 Feb 2010 tamin'ny 6:38 maraina
Doug, te-handamina fivoriana miaraka aminao aho hiresaka momba izany bebe kokoa. 🙂
Indray mandeha aho dia nandre mpanao hatsikana iray nilaza fa ho lasa heckuva haingana kokoa ny fivoriana any amin'ny orinasa amerikana raha vao manomboka ny fivoriana ny mpikarakara amin'ny fangatahana ny rehetra hanandratra ny tanany raha toa ka mbola miasa amin'ny asa izay efa niasany omaly izy ireo.
Febroary 20, 2010 amin'ny 12:26 PM
Lahatsoratra mahafinaritra! Ny filôzôfia "tsy voatery ny fivoriana rehetra" dia tondrozotran'ny ROWE, izay nankafizin'ny orinasako nandritra ny roa taona izao. Betsaka amintsika no manome lanja ny zavatra tsy mety, toy ny “fotoana mifanatrika”, na mameno seza amin'ny fotoana voatondro. Ny fihaonana sy ny fotoam-piatrehana dia lehibe ary manan-danja amin'ny toe-javatra mety, saingy tsy tokony hamela ireo zavatra ireo hanome antsika ny sain'ny famokarana rehefa tsy misy dikany izany.